Asambodo Splunk - Ajụjụ Interview na Azịza - ITS Tech School
Asambodo Splunk - Ajụjụ Ajụjụ na Azịza
Usoro ọzụzụ nkuzi Splunk ga-enye gị ihe atụ a na-atụ anya ịkọwa igwe-kere data iji Splunk arụ ọrụ. Splunk Analytics ga-enye gị ohere ịkọ nnukwu ọnụọgụ nke data. Nke a Splunk na-agụnye ọzụzụ na ịjụ ajụjụ dị mkpa, ịkekọrịta na ịkwụsị nsonaazụ, emepụta aha na ụdị ihe omume, ịmepụta akụkọ, na ihe e kere eke. Ọ ga - enyere gị aka ịmepụta engineering, Splunk syslog, ihe nkesa syslog, nyochaa nyocha, mkpuchi, ịjụ ajụjụ, na ọkpụkpọ ma mee ka ị bụrụ Onye Mmepụta Splunk dị irè.
Ime Splunk ga-agbanwe ahịa gị ma buru ya na ọkwa na-esonụ. Mee nke a, ajụjụ bụ: Ị na-eme ka aptitudes na ike gụọ Splunker? Na ohere na ee, dozie onwe gị maka onye kacha atụ ụjọ na onye ọrụ ga-ahụ maka eziokwu ahụ bụ na mmegide dị iche iche. Ị nwere ike ịmalite site na ịnweta nkwurịta okwu Splunk kasị mara amara nke a na-ekwu na nke a blog.
10 Ajụjụ Interview na Azịza maka Asambodo Splunk
Kedu ihe bụ Splunk? Gini kpatara Splunk ji jiri igwe kpoo ihe omuma?
Kedu akụkụ nke splunk / splunk engineering?
Kedu ihe iji ejizi License Master na Splunk?
Kedu ihe Splunk DB jikọtara?
Kọwaa 'mmebi iwu' site na Splunk.
Kedu ihe edere aha na splunk?
Kedu ihe dị iche n'etiti stats na usoro ihe omume?
Kedu ihe ejiji Splunk? Kọwaa ihe nwere ike ime ndụ.
Kọwaa ikike nke Alert Manager?
Kọwaa ọdịiche dị n'etiti isi mmiri nyocha ma chọpụta isi bunching?
Splunk bụ Google maka data igwe gị. Ọ bụ ngwanrọ / ngwongwo a na-eji iji hụ, na-achọ, na-ezisa ozi ọma, na ị na-ahụ data gị. Splunk na-ewepụta data igwe bara uru ma gbanwee ya n'ime ihe ọmụma nke ọrụ site na inye ezigbo oge iji ghọta data gị site na chaatị, ịdọ aka ná ntị, akụkọ na ihe ndị ọzọ.
A na-eji Splunk eme ihe maka ịmepụta igwe data ebe ọ nwere ike inye ahụmahụ na nchịkwa ngwa, ọrụ IT, nchedo, nchịkọta, njirimara njirimara, ihe ize ndụ perceivability na ihe ndị ọzọ.
Lee isi - nyere GUI ịchọ
Indexer - data igwe data na data.
Onye na - aga - Chee ihu na Ndepụta
Ihe nkesa na - Na-ejikwa ngalaba splunk na-ekesa ọnọdụ.
License ace na Splunk na-ahụ maka ikwe n'aka na a ga-edeba ezigbo ihe data. Akwụkwọ ikikere Splunk na-adabere n'olu data dị na windo 24hr ma tinyere usoro ndị a, na-ekwenye na ụwa na-anọgide na njedebe nke olu a nwetara.
Ọ bụ n'ozuzu SQL database modul na-enye gị ohere itinye mgbalị na data nchekwa data na Splunk gbara ajụjụ na akụkọ. Ọ na-enye nkwado nke a na-adabere adaba, nke nwere ike ime mgbanwe ma na-ewe oge n'etiti Splunk Enterprise na databases database.
Ọ bụrụ na ị kọwaa njedebe data, mgbe ahụ, a ga-egosi gị mmejọ 'mmebi iwu'. Akwụkwọ ikike ịdọ aka ná ntị na-atụgharị, ga-adịrị maka ụbọchị 14. Na azụmahịa ma ọ bụ ikike azụmahịa ị nwere ike ịnweta ozi 5 n'ime windo mbugharị nke 30 tupu ihe ndepụta nke Indexer na akụkọ kwụsịrị ịkwụsị. N'elu ụdị n'efu, ọ ga-egosi na 3 dị elu nke ịkpachara anya.
Ndepụta nchịkọta bụ faịlụ mmepụta ndabara (faịlụ nke plunk Enterprise na-eji na-eme ka ị ghara igosi onye ọzọ). Na ohere na ị họọrọ ịme ọtụtụ ụdị ndepụta ndepụta nke mkpirikpi ndepụta ị nwere ike mkpa iji mepụta faịlụ ndị ọzọ.
Nkọwapụta na-eme ka ị ghọta ihe ọ bụla na mpaghara ọ bụla dị na ntinye akwụkwọ gị ma chebe ha dịka àgwà dị iche iche. Ihe ngbadoro dị ka ọkwa, ma e wezụga nchịkọta nnakọta ahụ na-agbakwụnye na ndepụta ọ bụla na ọ bụrụ na nchịkọta ahụ metụtara ihe omume ahụ. Ihe nchịkọta na-edeba aha a rịọrọ maka nha dị ka stats, ọ bụ ezie na ha na-etinye ha na data mbụ.
A na-akpọ katalọgụ nke nwere data ederede dị ka akpa Splunk. Ọ na-agụnyekwa ihe omume nke oge. Ndụ ndụ ndụ Pail na-agụnye ịmalite mgbe ị gachara:
Hot - Ọ nwere dị ka oge edepụtara data ma dị njikere maka ịdekọ. Maka ndepụta nke ọ bụla, enwere ọ dịkarịa ala otu tankị ọkụ nwere ike ịnweta
Mma - Na-ekpo ọkụ na data data kpaliri si na-ekpo ọkụ
Nzuzo - Igwe ihe ngbochi oyi na-ekpo ọkụ
Nri oyi - Data gbanwere site na oyi. The indexer erases data siri ike dị ka okwu n'ezie n'agbanyeghị na ndị ahịa nwere ike isi otú ahụ na-ede ya.
Kụrụ - Ozi weghachite site na ndekọ faịlụ. Na ohere na ịdekọ data siri ike, ị ga-emesị weghachite ya na ndekọ ahụ site na (defrosting) ya.
Onye nlekọta na-akwado ya na-egosi na ọ bụ oge kachasị ka ọ na-ahapụ ịdọ aka ná ntị, dịka ọmụmaatụ, ihe omume dị njikere. Ọ na-enye njikọ iji hụ ndepụta ndị ederede site na ịkpachara anya ahụ. Ọ na-egosikwa aha dị njikere, ngwa, ụdị (akwụkwọ, oge, ma ọ bụ na-akpụgharị windo), ịdị mkpa na ọnọdụ.
Ịchọta isi mmiri bụ nchịkọta nke sava ejikọrọ na-arụ ọrụ maka ịkekọrịta ibu, Nhazi na onye ahịa mgbe ị na-achọ isi nchịkọta bụ otu nke ụlọ ọrụ na-achọ ka ị jupụta dịka ihe ntinye anya maka ịchọ. Ebe ọ bụ na ajụjụ otu isi na-eme ka ihe dị na ya na-ejikọta, ntaneti na nchụso ndị dị otú a nwere ike ịgba ọsọ ma hụ onye ọ bụla si ụyọkọ.
Ajụjụ Interview - Azịza maka ndị ọkachamara na Cyber-Security
50 Ajụjụ Nlekọta Ajụjụ Ọnụ Na-ajụkarị Ajụjụ Ị nwere ike ihu na Ajụjụ Ọnụ